Suudaan waxay ka digtay inay sii bataan khilaafka biyo-xireenka Niil – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Suudaan waxay ka digtay inay sii bataan khilaafka biyo-xireenka Niil
Suudaan waxay ka digtay inay sii bataan khilaafka biyo-xireenka Niil
Suudaan ayaa ka digtay sii kordhinta waxayna ku boorisay wadahadalo dheeri ah oo Masar iyo Itoobiya la yeeshaan oo ku saabsan dhismaha biyo-xireenka muranka dhaliyay ee wabiga Blue Nile ee Adis Ababa.
Xiisadda ayaa kacsan oo udhaxeysa sedexda dal kadib wadahadaladii u dambeeyay oo ay ku guuldareysteen in ay soo saaraan heshiis ku saabsan buuxinta iyo howlgalka $ 4.6bn ee Doolarka Dhaxe ee Itoobiya.
Wadahadalku waa xalka kaliya, “Wasiirka waraabka iyo waraabka ee Sudan Yasser Abbas ayaa u sheegay wariyeyaasha Axadii.
“Saxeex heshiis waa shardi noo ah kahor inta aan la buuxin biyo xireenka. Suudaan waxay xaq u leedahay inay dalbato,” ayuu yidhi.
Itoobiya ayaa ku dhawaaqday qorshe ay bilaabi doonto buuxinta biyo xidheenka bisha soo socota, iyada oo aan loo eegin in wax heshiis ah la gaadhay iyo in kale. Biyo-xireenka ayaa in kabadan 70 boqolkiiba dhameystiran wuxuuna balan qaaday inuu wadanka u abuuri doono koronto aad ugu baahan.
Masar, oo u aragta biyo xireenka weyn ee biyo-xireenka inay tahay khatar jirta, Jimcihii waxay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ka codsatay inay soo dhex gasho khilaafka, iyada oo ku tilmaamtay “mawqif aan wanaagsanayn”.
Sabtidii, Madaxweynaha Masar Abdel Fattah el-Sisi ayaa khudbad telefishan ka sheegay in dalkiisu uu weli u heellan yahay xallin siyaasadeed.
“Markii aan u nimid Golaha Amniga … waxay ka timid rabitaankeenna ah inaan qaadno dariiqa diblomaasiyadeed iyo midka siyaasadeed illaa dhammaadka,” ayuu yidhi.
Codsiga Masar, Jaamacada Carabta ayaa lagu wadaa inay kaga hadasho arinka kulanka casriga ah ee wasiirada arimaha dibada maalinta talaadada, diblomaasi ka tirsan horyaal ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP Isniintii.
Qaahira waxay ka cabsi qabtaa in biyo-xireenku uu si weyn hoos ugu dhigi karo biyo-soo-saarka ay ka hesho Wabiga Niil, kaas oo bixiya ku dhawaad ​​boqolkiiba 97 baahiyaha biyaha ee Masar.
Addis Ababa ayaa sheegtay in biyo-xireenku lagama maarmaan u yahay horumarintiisa isla markaana wuxuu ku adkaystay in saamiga biyaha Masar aanu wax saamayn ah yeelan doonin.
Niil waa waddo siiya biyaha iyo korontada 10-ka waddan ee ay mareyso.
Masar waxay sheegtay in biyo-xireenku uu halis galinayo qulqulka wabiga Niil, oo intooda badan asalkiisu ka soo jeedo ‘Blue Nile’, taas oo saameyn xun ku yeelata cunno yari iyo dhaqaale.
Previous articleAfrican Sahel wars force 1.7 million people to flee
Next articleRa’iisul wasaare Abey oo shir la yeeshay Saraakiisha Guud ee Ciidamada Itoobiya
Golaha Guurtida oo Cod Aan Diidmo iyo Aamus Lahayn Muddo kordhin...